jeudi, 05 avril 2018 22:06
Télécharger 3 Lois organiques élections
jeudi, 05 avril 2018 21:56
Ambohidahy: Nanao rodobe teny amin'ny HCC ny député Mapar sy Tim ary MMM
Tonga naneho ny tsy fankatoavany ny lalàna, izay nolaniana teny amin'ny Antenimieram-pirenena, ireo avy amin'ny antoko MAPAR, ny TIM, ny MMM, ary ireo tsy miankina, tetsy amin'ny HCC Ambohidahy, ary nitohy teny amin'ny BIANCO Ambohibao izany avy eo.
jeudi, 05 avril 2018 20:39
Evaluation de la situation: Une délégation de la SADC à Iavoloha
Une délégation de la SADC, dirigée par le Ministre des affaires extérieures de l’Angola, Manuel Domingos Augusto, a été reçue par le Président de la République, Hery Rajaonarimampianina, au Palais d’Etat d’Iavoloha, dans la matinée de ce 5 avril 2018. L’ambassadrice d’Afrique du Sud, Maud Dlomo, accompagnait également la délégation.
jeudi, 05 avril 2018 20:14
Ambatondrazaka: 8000 Ariary ny litatry ny lasantsy
Ritra ny tahirin-dasantsy eto an-drenivohitry ny faritra Alaotra Mangoro. Manjaka ny varomaizina. 6000 Ariary ny litatra androany maraina, niakatra ho 8000 Ariary izany nanomboka io hariva io. Vokatr’io dia niakatra ny sarandalana amin’ny fiarakaretsaka sy taxi-moto.
Mbola misy kosa tahiry gazoala, saingy mety tsy haharitra ela izany dia ho ritra raha tara vao misy famatsiana.
Mety ho sabotsy na any amin’ny fiandohan’ny herinandro any vao ho tonga ny famatsiana vaovao. Miainga amin’ny fiara avy any Toamasina, ary taterina amin’ny lamasinina avy eo Moramanga miazo an’Ambatondrazaka.
jeudi, 05 avril 2018 15:43
Andron’ny Zandarimariam-pirenena: Nahemotra ny fanamarihana
Noho ny 2 aprily izay tena daty fanamarihana ny Andron’ny Zandarimariam-pirenena Malagasy nifanindry tamin’ny fetin’ny Paska dia nahemotra ho androany ny fanamarihana izany.
Taona fahadimy ho an’ny fanamarihana ity taona 2018 ity ho an'i Madagasikara, fankalazana nalaina tahaka tamin’ny zandarimaria frantsay izay manana ilay antsoina hoe : Sainte Geneviève.
Hetsika maro no nanamarihana izany raha ho an’ny farimpiadidian’ny Zandarmaria Mahajanga manokana.
Mahajanga: Tratra ny vola sandoka saika haparitaka ny alahadin’ny Paska
Andian-jazavavy maromaro no nandeha niditra tao anaty bar iray teny Tsaramandroso nisotrosotro, rehefa nanefa vola dia tsikaritry ny tompon’ny toeram-pisotroana fa vola sandoka no nomen’ izy ireo, iray alina Ariary miisa efatra.
Nampandre ny manam-pahefana avy hatrany ny olona lasibatra ary natao ny fikarohana.
Tratra tamin’izany ireo mpivady izay nanaparitaka ny vola ny alahadin’ny Paska ary mbola nahatratrarana vola iray alina Ariary maromaro tao an-tokotanin’izy ireo.
jeudi, 05 avril 2018 13:41
Fianarantsoa: Andron'ny Zandarimariam-pirenena
Nisafidy ny asa fanadiovana ny Fiadidian'ny Zandarimariam-pirenena eto Fianarantsoa mba ho fanamarihana ity Andro nasionaly tokony natao ny 2 aprily ity. Teo amin'ny zaridaina antsoin'ny rehetra hoe : Magro Ampasambazaha no nanatontosana izany androany 5 aprily. Mitohy amin'ny fanomezan-drà izany rahampitso zoma.
Fantatra tamin'ny fihaonana teto fa nitombo ny isan'ny dahalo lavon'ny mpitandro filaminana sy ny Fokonolona ho tohin'ny fanenjehana azy ireo ny alahadin'ny Paka teo iny. Niampy dahalo 5 hafa izany. Miisa roa kosa ireo dahalo voasambotra sy mandalo famotorana amin'izao fotoana izao.
jeudi, 05 avril 2018 13:29
HCC Ambohidahy: Nametraka fitarainana ireo depiote
Tonga teto anivon'ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana (HCC) Ambohidahy Antanananarivo nametraka fitarainana sy taratasy mitantara ny fomba tsy ara-dalàna nandaniana ireo volavolan-dalàna fehizoro telo mikasika ny fifidianana ireo depiote.
jeudi, 05 avril 2018 13:28
Vie de parti: Le MAFI tient son congrès national
Le Madagasikara Firaisankina tient son congrès national ce jeudi à l'hôtel Panorama Andrainarivo à l'issue duquel son président national, Dr Jules Étienne fera sa déclaration de candidature à la présidentielle.